DF Somalia oo xildhibaan caan ah ku beddeshay xilkii uu iska casilay Guulwade - Caasimada Online
Home Warar DF Somalia oo xildhibaan caan ah ku beddeshay xilkii uu iska casilay...
DF Somalia oo xildhibaan caan ah ku beddeshay xilkii uu iska casilay Guulwade
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa loo magacaabay booskii la sheegay inuu iska casilay Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade).
Danjire Cabdiraxmaan Guulwade ayey dowladdu sheegtay inuu iska casilay xubinihi Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadalada Dowladda Federaalka iyo Somaliland. Danjiraha ayaa qiil u sameeyay hawlgalkii Ciidamada Militariga Somaliya ee Gobolada Waqooyi (Somaliland), sanadkii 1988-kii.
Cali Axmed Jaamac (Jangeli), Afhayeenka Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadalada Dowladda Federaalka iyo Somaliland ayaa sheegay inay ka xun yihiin hadalka ka soo yeeray Danjire Guulwade, isla-markaana uu yahay mid isaga uun ku kooban.
Afhayeenka oo u waramay Laanta afka Somaliga ee BBC ayaa sheegay in Danjire Guulwade uu warqadda istiqaalada soo gudbiyay 8-dii bishan, lagana aqbalay 9-kii bishan.
“Guddiga Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadaxaajoodka Dowladda Federaalka iyo Somaliland, xubin ka tirsanaa wuxuu istiqaaladiisa dhiibay bisha 8-deedii, waxaana laga ogolaaday bisha 9-keedii, wuxuuna sheegtay daruufo gaar ah.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Jangeli ayaa tibaaxay inaanu Danjire Guulwade ka tirsanayn Guddiga Wadahadalada, markii uu jeedinaayay hadalkiisan uu ku sheegay inay sax ahayd duulaankii Dowladdii Dhexe ee Gobolada Waqooyi, isagoo intaa ku daray in booskiisii toddobaad ka hor loo soo magacaabay Xildhibaan Dalxa.
“Guddiga xubin kama aanu ahayn markii uu hadalkan jeedinaayay, waxaana bedelkiisii la magacaabay toddobaad horteed. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa lagu soo bedelay.” Ayuu yiri Jangeli.
War qoraal oo ka soo baxay Villa Somalia ayaa lagu sheegay in hadalka Danjire Guulwade uu dhaawacayo wadahadalada haatan loogu gogol xaarayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoobay, dibna loogu yegleelayo dowladnimo Soomaaliyeed oo loo dhan yahay.